သစ္စာ – PoemsCorner
In: ဝတ္ထု Posted By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) Date: Dec 29, 2010
မှန်လား မှားလား အသေအချာစဉ်းစား
Leave comment9Comments & 408 views
”သစ္စာစူးလို့မှ သစ္စာစူးမှန်းမသိကြဘူး။ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုသာ အပြစ်ပုံချတတ်ကြတာ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့ သတိမရကြဘူး။ ”..
By: moehtetaung18 at Dec 29, 2010
ဟားဟား ငါ့အစ်ကိုလို့ မပြောရဘူး ချက်ဆို နှာခေါင်းက မီးတောက်တယ် ……….
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at Dec 29, 2010
ွှအီး ငိုမှာနော် :'( အကြီးဆိုပြီး အငယ်ကို မညှာဘူး။။ ပြန်ထုမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။
တိတ်နော်…..ငိုနဲ့ ….မုန်းလို့စတာ….
By: genius.jinx28 at Dec 29, 2010
ကိုလိပ်ပြာ ၇ဲ့ ဝတ္ထုဖတ်ရင်း တခုသွားသတိရမိတယ် အသိတယောက်ကိုပါ တနေ့ သူ ကျနော့်ကို မေးတယ် လူတယောက်စီမှာ တန်ဖိုးထားခြင်းတခုစီရှိကြတယ် မင်းတန်ဖိုးထားတဲ့အရာက ဘာလဲတဲ့ ကျနော်မဖြေနိုင်ခဲ့ပါ သူဖြေသွားတာ သတိရမိတာပါ သူတန်ဖိုးထားတဲ့အ၇ာက သစ္စာတ၇ား တဲ့။
By: dan at Dec 29, 2010
ခုလို အားပေးဖတ်ရှု့တာ ကျေးဇူးပါဗျာ. . .. ကိုဒန်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဟာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအောင် အစွမ်းထက်တော့ သူ တန်ဖိုးထားရကျိုးနပ်မှာပါဗျာ . . .